आमा बुवाको लागि छोरी जस्तो छोरा कहिल्यै हुदैनन् ! यो भिडियो हेर्नुहोस् आँखाबाट आशु झर्ने छ ! « गोर्खाली खबर डटकम
आमा बुवाको लागि छोरी जस्तो छोरा कहिल्यै हुदैनन् ! यो भिडियो हेर्नुहोस् आँखाबाट आशु झर्ने छ !
पानी बेचेर मुटुरोगी आमा पाल्दै गरेकी ९ वर्षीया Archana अहिले के गर्दैछिन् ? हेर्नुहोस भिडियोमा
भारतमा एक दिनमै ३५ हजार कोरो’ना सङ्क्रमित